एकीकृत सेवा केन्द्र बुर्तिबाङबाट गत आवमा राहदानी वितरणबाट ५४ लाख बढी राजश्व संकलन ! – ebaglung.com
एकीकृत सेवा केन्द्र बुर्तिबाङबाट गत आवमा राहदानी वितरणबाट ५४ लाख बढी राजश्व संकलन !
२०७५ श्रावण १३, आईतवार १८:४३	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
साधारण राहदानी लिने भन्दा द्रुत सेवाबाट राहदानी लिनेको संख्या तेब्बर बढी !
राम सुवेदी, बुर्तिबाङ २०७५ साउन १३ । एकीकृत सेवा केन्द्र बुर्तिबाङबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५४ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरेको राहदानी वितरणबाट उक्त राजश्व संकलन भएको सेवा केन्द्र प्रमुख जनक थापाले। ईबागलुङलाई बताए ।
सेवा केन्द्रबाट यस आर्थिक वर्षमा १ हजार २९ जनाले राहदानी निकालेका छन् । जसमध्ये ७ सय १३ जनाले दु्रत सेवाबाट राहदानी निकालेका छन भने ३ सय १६ जनाले साधारण तर्फको राहदानी निकालेका हुन ।
गत आर्थिक वर्ष सेवा केन्द्रले राहदानी वितरणबाटै ५५ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । गत वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षमा ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सेवा केन्द्रबाट १ हजार ६० जनाले साधारण तर्फको राहदानी निकालेका थिए भने ५ सय ५९ जनाले दु्रत सेवा बाट राहदानी प्राप्त गरेका थिए ।
यस आर्थिक वर्षबाट दु्रत सेवाका लागि राहदानी लिनेहरुले सेवा केन्द्रबाटै फर्म भरेर निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको सेवा केन्द्र प्रमुख थापाले बताए । सेवा केन्द्रमा २०७२ साल फागुन १५ गतेदेखि राहदानी वितरण सुरु गरिएको हो ।
यसैबीच सेवा केन्द्रबाट गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३ सय ३८ जनाले नयाँ नेपाली नागरिकता लिएका छन् भने १ हजार ३ सय ३९ जनाले प्रतिलिपि नागरिकता लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ति मध्ये नागरिकताको २ हजार २ सय जनाले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए भने ९ सय ६८ जनाले प्रतिलिपि नागरिकता लिएका थिए ।
यस्तै सेवा केन्द्रमा गत साउन ४ गतेदेखि मतदाता नामावली अध्यावधिक कार्य समेत सञ्चालन भइरहेको छ । हालसम्म ३३ जना नयाँ मतदाताले नामावली दर्ता गराएको कार्यालयले जनाएको छ । सेवा केन्द्रमै एक कर्मचारी व्यवस्थापन गरि फोटो सहितको मतदाता नामावली अध्यवधिक कार्य सञ्चालन भएको सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।
ग्याँसमा चाउचाउ पकाउदा जलेर ११ वर्षिय बालकको मृत्यु !
नेपाल बैंक बुर्तिबाङमा सन्ध्याकालीन सेवा सुरु : यस वर्षको मुनाफा ३ करोड ३७ लाख !